हामीले दूरदर्शिता राख्न सक्नुपर्ने अवस्था छ – हिमालयन ट्रिबुन
२०७७ बैशाख ९, मंगलवार ०५:१०
हामीले दूरदर्शिता राख्न सक्नुपर्ने अवस्था छ
HT २०७७ बैशाख ९, मंगलवार ०५:१०
नाओमी क्लेइन एक्जना उत्कृष्ठ अर्थशास्त्र बिश्लेषक हुन् । उनले “दि सक डाक्टर“ भन्ने अत्यन्त सशक्त किताब एक दशक अगाडि नै लेखेकी थिइन् । यी “सक डाक्टर भनेका मिल्टन फ्रिडमेन एक जना मनोबैज्ञानिक चिकित्सक क्याम्रोन भन्ने व्यक्ति हुन् ।“ माक्गील युनिभर्सिटीमा क्याम्रोन नामका एक मनोचिकित्सक कसरी “बिजुलीको सकद्वारा मानिसको सोचप्रणालीको आयाम बदल्ने“ भनी सिआइएको सहयोगमा अनुसन्धान गर्दै थिए, त्यस क्रममा उनले धेरै बिरामीको जीवन बर्बाद गरे । उनले उपचारका नाममा यातना प्रयोग गरे । उनलाई सिआइएले यातनाको साबित गराउने बिधि पत्ता लगाउन यो काम गराएको थियो ।
उता सिकागो विश्वविद्यालय स्कुल अफ इकोनोमिक्समा मिल्टन फ्रिडमेन भनिने अर्थशास्त्री कसरी बजारलाई हस्तक्षेप रहित स्वतन्त्र बनाउने र अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्ने भनी गहन अनुसन्धान गर्दै थिए । मानिसको सोचाइको आयाम बदल्न (ब्रेनवाशिङ्ग गर्न) बिजुलीको सक दिनुपर्छ भन्ने कुरा क्याम्रोनले पत्ता लगाए र उनले यसका लागि सयौं आफना पेसेन्टको जिन्दगी बर्बाद गरे, तर अमेरिकी सरकारले क्याम्रोनलाई कारबाही गरेन । उल्टै यस यातनालाई बिज्ञान भनेर तारिफ गरियो ।
उता जनताप्रति उत्तरदायी सरकार “कर्पोरेसनको अधिनमा हुनुपर्छ, र “राज्यले आफ्ना सम्पत्ति पनि ब्यापारीलाई दिनुपर्छ भन्ने“ मिल्टनले जब समाजमा संकट निर्माण हुन्छ, ठिक त्यही समयमा आर्थिक नीतिहरुमा एकाएक र आमुल परिवर्तन गर्ने बैकल्पिक नीतिहरु लागू गर्नुपर्छ भन्दै, बजारको पूर्ण अनियमन, निजीकरण र सामाजिक सुरक्षामा पूर्ण कटौती गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रस्तावित गरे । यस्तो संकटलाई अवसर बनाएर गरिने आमूल परिवर्तनलाई मिल्टनले “इकोनोमिक सक“ भने, नाओमीले लेखेकी छिन् । यी दुई डाक्टरका सिद्धान्तले हामीलाई नेपालको अहिलेको समस्या बुझ्न मद्दत गर्छन् । यी दुई “डाक्टर“ले संसारमा गरिबहरु माथी अत्याधिक ज्यादा अत्याचार गरे, नाओमीले भनेकी छन् ।
१. क्याम्रोनको “सक थेरापी“ र मिल्टनको “इकोनोमिक सक“ एउटै समयमा आएका सिद्धान्त हुन्, र दुबैको उद्देश्य पथभ्रष्ट भएका अनैतिक ठुलठुला कर्पोरेसनका हितमा मात्र काम गर्ने पूँजीवादका पक्षमा, अरु सबै बिचारधारालाई समाप्त गर्नु थियो । माक्र्सको बैज्ञानिक समाजवाद र केयनेसको विकासबाद यी दुबैले गरेका अनुसन्धानका प्रहारका केन्द्र थिए । मिल्टन निक्सनलाई प्रभावित पारेर र उनको असीमित बजार स्वतन्त्रताको कार्यक्रम लागू गर्न चाहन्थे, तर निक्सनले उनलाई मान्याता दिएनन् । त्यसैले मिल्टनले निक्सनलाई समाजवाादी भएको आरोप लगाए र उनी कतै न कतै पैदा हुने राजनितिक संकट पर्खिरहेका थिए ।
२. त्यसैबेला इन्डोनेसियामा सुकार्नोको लोकप्रिय गारिबहरुको पक्षधर सत्ता ढालेर जनरल सुहार्तोलाई सत्ताधिन बनाउन सिआइए अनेक कसरत गरिरहेको थियो । अन्ततः सुकार्नोको सत्ता अपदस्त गरेर इन्डोनेसियामा मानिसको आमहत्या सुरु भयो । मारिनुपर्ने मानिसको नाम सिआइएले दिएको थियो, नाओमी, नोम चोमस्की, क्याथी कादाने र अन्य थुप्रैले लेखेका छन् । यो हत्यामा भूमिका खेलेको सिआइएले इन्डोनेसियाको अनुभव प्रयोग गर्दै चिलिको लोकतान्त्रिक सरकारका रास्ट्रपति साल्बाडोर आलान्डे को सत्ता ढाल्न जनरल पिनोचेलाई समर्थन गर्यो । यो दिन सेप्टेम्बर ११, १९७३ थियो । यसलाई नोम चोमस्कीले पहिलो ९र११ को घटना भनेका छन्, जसले ल्याटिन अमेरिकामा पहिला आतंकवादको शुरु गर्यो, राज्यका तर्फबाट चोमस्कि भन्छन् ।
३. आलान्डेको सरकार अपदस्त गरेपछि पछि, पहिला चिली पुग्ने दुई समुह मध्ये क्याम्रोनको “सक थेरापी“ प्रयोग गर्ने सिआइए प्रशिक्षित याताना दिने मानिस र मिल्टनले प्रशिक्षित गरेका चिलिका अर्थशास्त्रका विद्यार्थी थिए, जसलाई “सिकागो ब्वाइज“ भन्ने गरिन्छ । दुबैको उद्देश्य “सक थेरापी“ लागू गर्नु थियो । दुबैले जोडतोडका साथ अफ्ना ज्ञान प्रयोग गरे। इन्डोनेशियामा पनि यीनै “सक थेरापी“ लागू गरिएको थियो । यहाँ सुहार्तोले बर्कलेमा पढ्ने युवा इन्डोनेसियाली बिद्यार्थीहरु बोलाएका थिए । यिनीहरुलाई “बर्कले माफिया“ भनिन्थ्यो, नाओमी भन्छिन् ।
४. चिलीमा क्याम्रोनका चेलाहरुले सयौं ठाउँमा यातना शिविर बनाएर हजारौं मानिसलाई यातना दिए । ३२०० को हत्या गरे । बिजुलीको “सक लगाएर मानिसलाई केही सोच्न नसक्ने बनाए । केयनेसको विकासवादका समर्थक (जस्को निक्सनले पनि प्रयोग गरेका थिए) र समाजवादका पक्षधरको दिमाग विजुलीको सकद्वारा समाप्त पार्न खोजियो । सिकागो ब्वाइजले, ब्यापारीलाई लगाइएको कर खारेज गरे, स्कुल र अस्पताल निजीकरण गरे, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममाथिको लगानी बन्द गरे । रास्ट्रका उद्योग र ब्यबसायहरु लिलाम गरे । इन्डोनेसियामा बर्कले माफियाले पनि यसै गरे । यसरी गरिब र कर्पोरेटिस्ट पूँजीवादका बिरोधीहरुको सर्वनाश गरे । नवउदारवाद र सैनिक तनाशाहीका बीचमा “विवाह सम्पन्न“ भयो । इन्डोनेसिया, चिली, उरुग्बे, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, ग्वाटेमाला सबै ठाउँमा सैनिक तानाशाहीको जन्म भयो, नवउदारवाद पनि पनि लागू भयो, ठुलठुला कर्पोरेसनहरु ल्याटिन अमेरिकामा निर्बाध शोषण गर्न पनि पाए । बिरोधीलाई क्याम्रोनको सक थेरापीले काम गर्यो ।
५. इन्डोनेसियामा सुकार्नोले अन्तर्रास्ट्रिय मुद्राकोष र बिश्व बैंकका कार्यक्रम बन्द गरि वाविन्ङ्ग्टन फिर्ता पठाएका थिए । आलान्डेले इन्टरनेसनल टेलिफोन र टेलिग्राफ, र चिलीको तामा खानीमा एकाधिकार जमाएको अमेरिकन कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए । सुकार्नो र आलान्डे दुबै केयन्सेनियन थिए, माक्र्सवादी होइन । उनीहरु लोकतन्त्र र सामाजिक विकासलाई उन्नत बनाउन सफल भएका थिए, जस्लाइ किसिन्जरले “डर्टी भाइरस“ भनेका थिए। तेस समयको ल्याटिन अमेरिका युरोप जस्तै देखिन्थ्यो भनी नाओमीले लेखेकी छिन् । स्कुल सार्वजनिक थिए । युनिभर्सिटी सार्वजनिक थिए । गरिब र श्रमिकका छोराछोरी विश्वबिद्यालय जान पाए । अस्पताल सार्वजनिक थिए । तर जब मिल्टनको “नवउदारबादी सक र क्याम्रोनको बिजुली सक“ शुरु भयो, चिलीको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो । ३० हजार मानिस बेपत्ता पारिए । इन्डोनेसियामा दश लाख मानिसको हत्या भयो ।
६. मानव अधिकार यी देशहरुमा रोहिरह्यो । तर मानव अधिकारवादीले ति गरीबको खोजी गरेनन् । मानव अधिकारका कुरा गर्ने संस्थालाई पनि सिआइएले लगानी गरेको हुँदोरहेछ, नाओमीले लेखेकी छन् । जे होस नवउदारवाद र सैनिक तानाशाहको राम्रो संयोजन मिल्ने रहेछ, त्यसबेला मानव अधिकारको खोजी नहुने रहेछ । स्पेनको एउटा अदालतले पिनोचेलाई पक्रिने वारेन्ट जारी गर्यो । तर पिनोचेलाई बेलायतमा हाउस एरेस्टमा राखेर बेलायतले संरक्षण गर्यो । मार्गरेट थ्याचर र पिनोचे राम्रा मित्र थिए । थ्याचर लोकतान्त्रिक थिइन, पिनोचे सैनिक तानाशाह । तर दुबैको विश्वास एउटै थियो नवउदारवाद । अमेरिकी बुद्धिजीवी कारोथेसले लेखेका छन्, “अमेरिका लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ र सुरक्षासँग जोडेर हेर्छ, अतः आफ्ना प्रमुख स्वार्थहरुसँग असंगत भए लोकतन्त्रको प्रबद्र्धनमा अमेरिकाको चासो हुँदैन।“ त्यसैले, साउदी अरब अमेरिकाको मित्र हो । तर तामाखानी रास्ट्रियकरण गर्ने चिलीको समर्थन गर्नुपर्ने कारण उसलाई रहेन, भलै त्यो लोकतन्त्र थियो । अर्थात् बजार स्वतन्त्रता भयो भने लोकतन्त्र नभए पनि हुन्छ । त्यसैले कासिमलाई अपदस्त गरि सद्दामलाई ल्याइएको थियो । जब उसले तेलमा आफ्नो अधीन जमाउन खोज्यो उसलाई पनि समाप्त गरियो ।
६. हिजो बीपीलाई अपदस्त गर्दा किन पश्चिमी शक्ति खासगरी अमेरिकाले आपत्ति गरेन ? किनभने बीपी समाजवादी थिए । २०४८ सालपछि “एनआरएन“ ठिट्टाहरु अर्थमन्त्री हुन आइपुगे । एकाएक चिया विकास निगमदेखि छाला जुत्ता कारखाना बेचिए । गोकर्ण रिसोर्ट र तारागाउँ विकास समितिको जमिन होटललाई दिइयो । कागज कारखाना पनि लिलाम गरियो । यसो नगरी अरब र मलेसियामा कामदार पठाउन सम्भव थिएन । मानिसलाई बेरोजगार पार्न नेपालका उद्योग समाप्त पारिए । सन १९८८ देखि १९९६ सम्म नेपालमा औद्योगिक विकासदर १६५ थियो । तर २००२ मा आइपुग्दा माइनस ४५ मा झर्यो । शिक्षा निजीकरण भयो । स्वास्थ निजीकरण भयो । यसप्रति आपत्ति गर्ने मदन भण्डारी मारिए । गणेशमान बीपी बादी थिए, त्यसैले लखेटिए । काङ्ग्रेसमा समाजवाद सकियो, गैरसरकारीवालाले माक्र्सवादी पनि सिध्याए । मजदूर संगठन गैरसरकारी संस्थामा परिणत भए । सन् २००३ पछि इराकको तेलमा अमेरिका र ब्रिटिस कर्पोरेसनहरुको पूर्ण अधीन कायम भयो । १७०० निजी सुरक्षा कम्पनीहरु र अनकौं कपोरेसनले अरबमा काम गर्ने मौका पाए ।
अहिले हाम्रा युवाहरु यिनै कम्पनी र अरु पश्चिमी कम्पनीमा काम गर्छन् । हेर्दा उनीहरु अरब गएका छन्, तर यथार्थमा उनीहरु नवउदारवादले शोषण गरेका उतिबेला उपनिबेशले प्रयोग गरेका दास जस्तै बनाइएका छन् । उनीहरुको पेन्सन छैन । उनीहरु बेरोजगार हुँदा पाल्ने सुरक्षा प्रणाली पनि छैन। उनीहरुको रगत र पसिना बगेको छ, यता जमिन सबै बाँझा छन् । हामीलाई गोकर्ण बिस्टलाई किन निकालेको होला, यी त राम्रो काम गर्दै थिए भन्ने लाग्थ्यो । तर यिनले दुईटा गलत काम गरे । एउटा, यिनले सरकारले ती विदेश गएका मजदूरको संरक्षण गर्न खोजेको देखाए । त्यो मलेसिया र अरबका पश्चिमी कर्पोरेसनलाई मञ्जुर थिएन । यसैबेला यिनले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अगाडि ल्याए । यी यस्ता कार्यक्रम नवउदारवादलाई मन पर्दैनन भन्ने बिस्टले थाह नै पाएनन् । उता कृषि मन्त्री “चक्लाबन्दी“ नभएर कृषिको आधुनिकिकरण हुन नसक्ने भयो भन्दै हुनुहुन्छ । चक्लाबन्दी गरेर ठूलठूला फार्म बनाएपछि त किसानको ठूलो विकास हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ । तर चक्लाबन्दी भएपछि आधुनिकिकरण गर्न त गरीबसँग पैसा हुँदैन । तब किसान सबै सकिन्छन् । गरिब सकिएपछि त गरिबी सकियो नि । यो नवसाम्यवादको सिद्धान्त हो कि ! किसानलाई अहिले चाहिएको कुरा आधुनिक खेती गर्ने सीप र ज्ञान हो ।
उसले राम्रो बीउ चिन्नु पर्छ । उसले बर्खाको पानी अहाल खनेर जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने जान्नु पर्छ । उसले आफ्नो जमिनमा के खेती लगाउने हो भन्ने जान्नु पर्छ । उसको बालीमा रोग लाग्दा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जब किसान सचेत हुन्छ, उसले कोस्टारीका, भेनेजुएला, चीन, क्युवा, भारतको पन्जाब र केरलामा जस्तो आफैं सहकारी निर्माण गरेर चक्लाबन्दीको वातावरण बनाउँछ भन्ने मन्त्री ज्युले त बुझेकै होलान्, तर त्यसो गर्यो भने मानिस कृषिमा लागेर अरब जान बन्द गर्छन् भन्ने डर यहाँका विदेश रोजगारका मालिकलाई थाहा छ । ती त नेता र पूँजीपतिका कम्पनी हुन् । तिनको रक्षा त विदेशी कर्पोरेसन र अर्थ मन्त्रालयले गरेकै हुन्छ । उनलाई सल्लाह दिनेले बताएको होला “हजुर किसानलाई त पैसापो पठाउनु पर्छ।“
यता शिक्षा मन्त्रालयले उच्छ शिक्षा विधेक तयार गरेको रहेछ । त्यसमा विश्वविद्यालय खोल्न २, ४ सय रोपनी जमिन र थुप्रै करोड पैसा चाहिने रहेछ । जिल्लाका मानिस मिलेर विश्वविद्यालय खोल्न नहुने रहेछ, त्यसमा पनि कर्पोरेसननै चाहिने रहेछ ।
नाओमी लेख्छिन्, मानिसमा भ्रम जब सकिन्छ, उसले इतिहासको बिश्लेषण गर्न थाल्छ । उसले सत्य भेट्छ । ३० बर्ष पछि पिनोचेको सत्ता सकियो । अर्जेन्टिनाका शासकमाथि कारबाही भयो, न्यायाधीशले उनलाई आमहत्याको आरोपमा सजाय गरे । हाम्रो संस्कृतिले समयलाई चक्र मान्छ । देश बिगार्ने मानिसहरुलाई इतिहासले छोड्दैन । तर नेपालमा एउटा समस्या छ, नेपालीले प्रमाण खोज्दैन । भावनामा भड्किन्छ । उसलाई तत्काल परिवर्तन चाहिन्छ । उसको क्रान्ति भनेको अरुलाई बेसमरी गाली गर्नु हो ।
उसलाई समाज हांक्ने बिचारको खोजीको रहर लाग्दैन । मानिस गलत हुँदैन, गलत उस्ले बोकेको बिचारधारा र सोच हुन्छ । नाओमी भन्छिन्, अमेरिकामा जुन राष्ट्रपति आउँदा पनि अर्काको सत्ता परिबर्तन गर्ने नीति गएन, किनकि त्यो बिचार हो नेता होइन कारण । नेपालमा गरिबलाई माया गर्ने भन्दा राणा हुन चाहने नेता र ६० किलोको माला लगाइदिएर चाकरी गर्ने कार्यकर्ताको बिगबिगी बिचारहिनताको परिणाम हो ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरस लागेको छ । ट्रम्प भन्छन् “मानिस मर्छन् भनेर उद्योग बन्द गर्न मिल्छ?“ न्यूयोर्कका मेयर भन्छन्, मानिससँग बाँच्ने उपाय छैन । गरिबलाई दिइने कल्याणकारी सुबिधा मिल्टनले खाइदिए । उनी बाँचिरहेका भए, कोरोनालाई पनि तर्साउने गरि बजारलाई अझै स्वतन्त्र गर्ने थिए । यता नेपालमा गीत त बजिरहेका छन् “यो देश हाम्रो हो“। यदि त्यसो हो भने, किन सरकारले गरिबलाई एक महिना पाल्ने दायित्व नलिएको? किन कृषि मन्त्री ज्युले किसानका तरकारी बजारमा ल्याउने उपाय नसोच्नु भको ? के गर्नु जमिन चक्लाबन्दी गर्न सकिएको छैन, त्यसैले होला।
बामपन्थी पार्टीलाई गैंडालाई चिनी खुवाएर खाडलमा हाल्न खोजिंदै छ भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो । भविस्यमा एउटा संकट आउन सक्छ भन्ने त ख्याल होलानै । ठूल्ठूला नेताले त सबै जानेकै हुन्छ, अझ नेपालमा नेताहरु सारै बिद्वान । त्यसैकारण अहिले विश्वविद्यालयहरु आराममा नेताहरू सक्रिय । चिलीमा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा तोप हानिएको थियो। राष्ट्रपतिले ढोकामा आएर जनतालाई सम्बोधन गरे । मलाई मारे पनि म तानाशाह समक्ष आत्मसमर्पण गर्दिन । उनले ज्यान दिए । त्यसपछि चिलीमा यातनाको राज्य शुरुभयो ।
एक जना चिनियाँ प्राध्यापकले १९१२ मा भनेका थिए, नेतृत्वहीन जनता विवेककरहित हुन्छ । ऊ हल्लाका पछि हिँड्छ। क्लिक पैसा कमाउने पत्रकार जन्मिन्छन् । सुनसरीमा देखियो नि, हैन ? फेरि थुप्रै अनलाइन ले त कोरोना भन्दा राजनीतिक बहस मन पराएका छन् । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुबैले राम्रोसँग ख्याल गर्नु पर्ने हो कि ! जनता बाँचे मात्र देश रहन्छ । बिचारबिनाको राजनीति र बम्बेको कामतीपुर उस्तै हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू बिचारबिहीन हुँदा देशले दुःख पाएको हो । सत्ता र बास्नाले लोभ्याउँछ । बास्ना पनि स्थायी हुँदैन सत्ता पनि स्थायी हुँदैन । स्थायी इतिहास हुन्छ, अँध्यारोमा लुकेर बस्छ, मौका परेपछि मर्ने गरि ठुङ्छ ।
Posted in विचार, साहित्य
साझा पार्टीले भन्यो - राजकीय जिम्मेवारीको वोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो
Spread the loveनेपाल सरकारले सोमबार जारी गरेको दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझा पार्टीको ठहर छ। उक्त अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता लिन साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ। झण्डै दुई-तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास […]
२०७७ असार ६, शनिबार ०३:३०
भारतको लालकिल्लामा आन्दोलनरत किसानले गाडे झण्डा